महिला को प्राण कहिलेकाहीं परिवर्तन आवश्यक छ। के कम्तिमा प्रयास यसमा खर्च, परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ? साँचो, एक केश र बाल रंग परिवर्तन गर्नुहोस्। हुन सक्दैन आफ्नै कपाल कट मा बाल-केहि अलि सजिलो संग - एक hairdresser - त्यहाँ एक तरिका हो। तर यहाँ के तपाईं चाहनुहुन्छ भने र घरमा रंग परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। अक्सर, को पाठ्यक्रम, को बालिका स्पष्ट गर्न, सलोनियां, Jokes को विशाल संख्या बावजुद, यो सजिलो ध्यान आकर्षित गर्न किनभने रुचाउँछु। साथै, धेरै महिला यो रंग र आफूलाई आनन्द।
त्यसैले, बाल discolor गर्ने बारे सोच, यो पनि सानो घर बनेको रासायनिक Brightening, छोटो समय मा washcloth मा बाल बारी गर्न सक्ने सम्झना हुनुपर्छ। साथै, मूल छवि को परिवर्तन एक व्यक्ति अक्सर छैन, तर कपाल SPOILED पहिले नै छ ... अर्को हजुरआमा र ठूलो-हजुरआमा प्रयोग प्राकृतिक उपचार को सहायता गर्न आउन यहाँ अनि। यो chamomile, मह, सिरका, rhubarb ... यो सबै क्षति को जोखिम बिना बाल discolor कसरी समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्नेछ, र घर मा।
घरमा बाल कसरी discolor गर्न
1 समस्या "कसरी discolor कपाल?" सुलझाने मा पहिलो सहायक को मह छ। यस मामला मा, सबै कुरा धेरै सरल छ - धोए र सुकेको कपाल मा, एक सानो मह (प्राथमिकताको Acacia) लागू र सिलोफन मा र्याप। मुश्किल यो मास्क तपाईं 8 घण्टा आवश्यक कपाल राख्न छ। मह मात्र छ , केश lightens विरंजन एजेन्ट जारी, तर पनि तिनीहरूलाई खुवाउनुहुन्छ। उहाँलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा एलर्जी थियो। प्रक्रिया पछि राम्ररी किसिमहरु धुन।
साथै, मह स्पष्टीकरण लागि मास्क बनाउन संयुक्त सकिन्छ: यो एक कचौरा लिन र प्राकृतिक मह (4 चम्मच) संग तेल को3चमचा मा मिश्रण गर्न आवश्यक छ। को कचौरा तर्फ एक घण्टा को तर्फ एक चौथाई सेट गर्नुहोस्। मिश्रण त्यसपछि बाल लागू र संकुचन 40 मिनेट छोड्न, त्यसपछि पानी र स्याम्पु संग धुन थियो। प्रक्रिया धेरै पटक दोहोर्याइएको छ यो सबै तपाईं एक Strand बनाउन चाहनुहुन्छ धेरै हल्का कसरी निर्भर आवश्यक छ।
2. अब कसरी एक डेजी संग बाल discolor। यो सरल प्रक्रिया आफ्नो बाल केही रंग हल्का। त्यहाँ अन्य घटक संग chamomile धेरै संयोजन हो कपाल हल्का। यहाँ तिनीहरूलाई केही हो:
- बलियो तीन कप संग मिक्स कागति को रस chamomile चिया , र लुगा धुने पछि मिश्रण को किसिमहरु कुल्ला। यो प्रक्रिया को उत्कृष्ट परिणाम हेर्न हावा वा सूर्यका (प्राकृतिक तरिका) मा बाल सुक्खामा अनुमति दिनुहोस्।
- यो chamomile को भाग मा rhubarb तीन भागहरु को एक अनुपात मा chamomile र rhubarb जरा वा पात मिश्रण गर्न सक्नुहुन्छ। को जरा एक पानी स्नान मा एक घण्टा को तेस्रो राख्न आवश्यक दबाव डाल गर्दा र प्रयोग rhubarb को पात बस सुन्दर सम्म जिद्दी। यी broths जो पछि तिनीहरूले न्यानो पानी rinsed गर्नुपर्छ बारे आधा एक घण्टा, लागि बाल मा लागू छन्।
- लिनुहोस्2चमचा nettle र chamomile फूल र आधा लीटर मात्रा मा पानी उम्लिरहेको खन्याउन। रक्सी खींचना आधा घण्टा लेखन र शोरबा फिल्टर पछि प्रयोगको लागि तयार छ। Chamomile निको चमकती र बाल जरा बलियो बाहेक।
- हाइड्रोजन पेरोक्साइड को साथै बलियो एक डेजी चमकती लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तसर्थ, बाल मा प्रतिकूल प्रभाव गर्दा एक पेरोक्साइड Brightening भन्दा कम हुनेछ। 200 ग chamomile पेरोक्साइड को 30 एमएल थप्नुहोस्।
स्पष्टीकरण को 3. अर्को राम्रो तरिका - दालचिनी। यो प्रक्रिया हप्ताको समयमा कम्तिमा4पटक आवश्यक दोहोर्याउनुहोस्। एक कचौरा4दालचिनी (पाउडर) बाल कंडीशनर को2चमचा संग मिश्रण। यो पेस्ट को किसिमहरु गीला र पन्नी तिनीहरूलाई र्याप लागू हुन्छ। एकै रातमा मा मास्क छोड्न वा कम से कम4घण्टा। त्यसपछि स्याम्पु कुल्ला।
कागति संग4चमकती कपाल हल्का र रंगा बाल, संसारभरि प्रयोग गर्न मद्दत गर्नेछ। दबाउन पाउडर बनाउने, एस्कोर्बिकएसिड ट्याब्लेटको। एक कचौरा मा, पाउडर2घण्टा परिणामस्वरूप3चमचा मिश्रण। चमचा कागति को रस र केही शैम्पू को। किसिमहरु मा मिश्रण र राम्रो मालिश लागू हुन्छ। पलीथीन आफ्नो टाउको कवर र कम से कम 50 मिनेट को लागि छोड। स्याम्पु संग बन्द धुन। तपाईं पनि कागति को रस, ज्ञात विरंजन गुण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईं पतला गर्न आवश्यक रस, प्रति पानी लीटर सिट्रस लगभग आधा प्रयोग गर्न आवश्यक छ। लागि थप उपयुक्त तेल बाल, किनभने यो एक सुकाउने प्रभाव छ।
5 केश चम्किलो र शोरबा प्याज बोक्रा हुन सक्छ। यो गर्न, भरण प्याज बोक्रा आधा लीटर जार र Boiling पानी खन्याउन। सुन्दर, नाली सम्म रक्षा। पानी संग पतला र प्रत्येक आफ्नो कपाल धुन पछि कुल्ला। को जलसेक सुनको रंग दिन र अलिकति चमकती प्रभाव छ गर्नेछ। यो क्षतिग्रस्त र विभाजन समाप्त को उपचार को लागि पनि प्रयोग गरिन्छ।
प्रयोग गर्न पूर्व, चिकनाना गर्न बाल वरिपरि छाला शोरबा दाग छैन गर्न।
6 अनि, को पाठ्यक्रम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड संग बाल discolor कसरी प्रश्न बेवास्ता नगर्नुहोस् - यो विधा एक क्लासिक, discoloration गर्न तेज र सजिलो बाटो हो। तर पनि एकै समयमा कट्टरपंथी। आखिर, अघिल्लो विधिहरू आफ्नो बाल लाइट ब्राउन र खैरो-haired हल्का मद्दत गर्न सक्छ। Brunettes उपयुक्त पेरोक्साइड लागि। यसलाई प्राथमिकताको अन्य सामाग्री संग संयोजन मा, एक घटक रूपमा प्रयोग गर्न अवांछनीय छ। उदाहरणका लागि, पेरोक्साइड को प्रभावकारी माध्यम, निम्न जसको लागि आवश्यकता: camomile फूल (सुक्खा), पानी को 350 ग्राम,3प्रतिशत पेरोक्साइड को5ग्राम 100 G। लागि आधा घण्टा जिद्दी, फिल्टर र पेरोक्साइड थप्न chamomile को फूल र पानी उम्लिरहेको पोख्नुहोस्। 40 मिनेट लागू हुन्छ। आफ्नो बाल मा मिश्रण र पलीथीन ढाकिएको, शैंपू कुल्ला।
त्यसैले यसलाई आवश्यक तिनीहरूले प्रयोग गर्दा कपाल हानि छैन भनेर राम्रो मानिसहरूको तरिकामा सैलून जाँदै होईन वा रोशन महंगा रंग किन्न।
Ashy बाल रंग - साँच्चै शाही रंग
रंग र उत्पादन को सुविधाहरुको प्यालेट: बाल "टनिक" को लागि Tonics
Fruktis "पूर्ण शक्ति मा वृद्धि": समीक्षा, मूल्य, अनुप्रयोगको सुविधाहरू
आफ्नो बाल मात्रा बनाउन धेरै तरिकाहरू
Crimea मा एक रोमिङ कसरी जडान गर्न?
आभूषण क्रिस्टल: बहुमूल्य अनुहारहरू
र यदि हामी प्रदर्शनी केन्द्र एस्ट्रोनटिक्स को संग्रहालय भ्रमण छैन?
एक विज्ञान रूपमा व्यवस्थापन समाजशास्त्र
पकाउने मा खुर्सानी मरिच
खीरे कसरी वृद्धि गर्न
बेंजामिन म्याककेन्जे। जीवनी, चलचित्रोग्राफी र अभिनेता को व्यक्तिगत जीवन
Veles नाशपाती को किसिम को विवरण। नासपाती Veles: समीक्षाएँ माली
घन्टी समाधान छ। तयारीको र यसको प्रयोग विवरण
बस एक व्यायाम संग कायाकल्प - भ्रम वा वास्तविकता?